August 11, 2014 – democracy for burma
#Thailand #CONDO #search #missing #persons #continued
On August 11, 2014 August 13, 2014 By Burma Myanmar newsIn ThailandLeaveacomment
13.Officials confirmed that the search for bodies continued missing persons, even if it rains heavily
Pathumthani police have arrestedacontractor of the U Place condominium building which collapsed Monday killing three workers and injuring over 20 others.
The contractor, Diew Orabchoan, was arrested yesterday. He was initially charged with being reckless in construction that caused deaths and injuries to others.
Diew is among five suspects wanted by the police in the collapse of the building.
Arrest warrants were issued for them today by the Pathumthani court.
The four others include the owner of the condominium Mrs Pensri Kittipaisarlnont, the engineer Mr Saksit Inthong, owner of the construction firm Plookplaeng Co Mr Chanaichon Kerdthes, and foreman Jira Chaimun.
The four persons are contacting the police to turn themselves in today.
Thai RDA’s K9 Team at Condo Collapse 11Aug2014
11/8/2014 A commercial building,6high floor, Canal5District pathum under construction collapsed today.Mother with baby daughter-3 dead many injured-
On August 11, 2014 August 15, 2014 By Burma Myanmar newsIn ThailandLeaveacomment
7.นายธนากร ตรีเมฆ อายุ 16 ปี
วันที่14 ส.ค. 57
จนท.นำร่างผู้เสียชีวิตรายล่าสุดออกมาจากซากอาคารได้แล้ว รายที่4ของวันนี้ ยังไม่ทราบชื่อ
cr.ทีมงานคนหลังไมค์ -Nalinee Siriked:นายธนากร ตรีเมฆ อายุ 16 ปี
ดร.อำมร เชาวลิต เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม นายพานิช จิตร์แจ้ง อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และนายกรีฑา สพโชค Continue reading “#อัพเดท #15/8 #รายชื่อผู้บาดเจ็บ #เสียชีวิต #คอนโด #ที่ปทุมฯ” →
#Myanmar #Thailand :Dhammar school open ceremony in Mae Sai
On August 11, 2014 By Burma Myanmar newsIn BurmaLeaveacomment
Dhammar school open ceremony in Mae Sai photo credit BY Prakash Giri
On August 11, 2014 August 11, 2014 By Burma Myanmar newsIn BurmaLeaveacomment
Proportional Representation System / အချိုးကျ ကိုယ်စားပြုစနစ် (PR)
အချိုးကျ ကိုယ်စားပြုစနစ်၏ သွင်ပြင်လက္ခဏာရပ်များ
၁။ပြိုင်ဆိုင်မှုသည် ပါတီများအပေါ်တွင်သာ ဗဟိုပြု၍ ရရှိသောမဲပမာဏအလိုက် အမတ်နေရာ အရေအတွက်ကို ထားရှိရမည်ဟူသော သဘောတရားကို အခြေခံခြင်း
၂။မဲဆန္ဒတစ်နယ်လျှင် ကိုယ်စားလှယ်အများအပြား ထားရှိခြင်း
၃။မဲရေတွက်၍ အမတ်နေရာ သတ်မှတ်ခြင်းဖြစ်စဉ်သည် ယေဘုယျအားဖြင့် ရှုပ်ထွေးပြီး ပွင့်လင်းမြင်သာမှု အားနည်းနိုင်ခြင်း
၄။ပါတီက ရရှိသော စုစုပေါင်းမဲရာခိုင်နှုန်းအပေါ်မူတည်၍ ကိုယ်စားလှယ်များ ရွေးချယ်သတ်မှတ်ခြင်း
အချိုးကျ ကိုယ်စားပြုစနစ်အုပ်စုတွင် ပါဝင်သော စနစ်များ –
၂။Mixed Member Proportional;
၃။Single Transferable Vote;
၄။ Single Non-Transferable Vote;
၁။ပါတီစာရင်းအခြေပြုမဲပေးစနစ်(Party List System)
အသုံးပြုသည့်နိင်ငံ – အစ္စရေး၊ ဘယ်လ်ဂျီယံ။ လူဆင်းဘတ်၊ ဆွစ်ဇာလန်၊ EUပါလီမန်
— တစ်နိုင်ငံလုံးအား မဲဆန္ဒနယ်တစ်ခုတည်းအဖြစ် သတ်မှတ်ခြင်း
— ဒေသအခြေပြုပါတီစာရင်းစနစ်တွင် ကိုယ်စားလှယ်အများအပြားထားရှိသော မဲဆန္ဒနယ်များသတ်မှတ်ခြင်း။
— ပါတီများသည် မိမိတို့ပါတီမှ ဦးစားပေးမှုအစဉ်လိုက် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းစာရင်းကို မဲဆန္ဒရှင်များအားချပြခြင်း။
– -မဲဆန္ဒရှင်များသည် ကိုယ်စားလှယ်များအတွက်မဟုတ်ဘဲ ပါတီအတွက် မဲပေးကြခြင်း။
— ရွေးကောက်ပွဲတွင် ရရှိသော ထောက်ခံမဲ အမျိုးအစားပေါ်မူတည်၍ ပါတီများအား အမတ်နေရာခွဲဝေပေးပြီး ပါတီစာရင်းမှ ကိုယ်စားလှယ်များဖြင့် ထိုနေရာများအားဖြည့်စွက်ခြင်း။ Continue reading “#အချိုးကျ ကိုယ်စားပြုစနစ် #PR/ #Proportional #Representation #System” →
#BURMA #MYANMAR #TRAVEL #E-VISA #ONLINE